♣တောသူမလေး♣၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိန်းကလေးLashioMyanmar Like6members like this
ဘလော့များ (543)ဆွေးနွေးချက်များ (49)အဖွဲ့များ (4)ဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ (1) ♣တောသူမလေး♣'s Likes Gifts Received (2)
From နီစံ (အနီ)
မေတ္တာရိပ်ကိုလည်း အလည်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်
Loading feed	♣တောသူမလေး♣'s ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... ♣တောသူမလေး♣'s Videos
၃ နှစ်သား ပါရမီရှင်လေး Added by ♣တောသူမလေး♣3Comments
ရှိခိုးတာနဲ့ ကန်တော့တာဟာ အတူတူပဲလား ? တစ်မျိုးစီလား ?
Started this discussion. Last reply by လင်းကိုကို Mar 15. 19 Replies
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးလူကြီးတော်တော်များများကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ အလုံးလိုလိုဟာ အတူတူပဲလို့ ဖြေကြတယ်။ ဒီလို ဖြေကြတဲ့ အတွက်လဲ သူတို့မှာ အထောက်အထားက ရှိနေတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း ရနေကြတဲ့ သြကာသ ကန်တော့ကြိုးထဲမှာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ဘာသာရေး) အားလုံးကြည့်ရန်...
နန်းလေး leftacomment for ♣တောသူမလေး♣"ကျေးဖူးပါ.."9 hours agosaw htwe leftacomment for ♣တောသူမလေး♣"ညီမလေးရေ mp3 တရားဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်လောက်တင်ချင်လို့ ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာ ပြောပေးစေလိုပါတယ်။"May 16waiphyoaung liked ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'May 15မြူနှင်းမှုံ liked ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'May 14သူရိယ leftacomment for ♣တောသူမလေး♣"ဟုတ်ကဲ့ကျတော်မွှေးနေံအမှတ်တရရှိနေပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဘ၀မှာအဆင်မပြေမှုတွေ့ကင်းဝေး ကိုမြတ်နိုးတဲ့ဘ၀ ပန်းတိုင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်"May 14မြတ်သွင်ကို liked ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'May 12waiphyoaung commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"တကယ်ကိုပဲ အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုပါပဲ။ တပည့်တော်ကိုးကွယ်တဲ့သာသနာတော်အတွက် ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေလိုက်ပါမယ်။ သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။"May 10pont pont commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"ဆရာမရဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကလည်း ကောင်းလိုက်တာ၊ ဦးပဉ္စင်းရဲ့ အဖြေလေးများကလည်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်မိပါတယ်ရှင့် ဒီလို အင်မတန် ဗဟုသုတ ရတဲ့ အင်တာဗျူး ကဏ္ဍမျိုး အမြဲတမ်းရှင်သန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် နော် ဆရာမ။"May 9♣တောသူမလေး♣ and saw htwe are now friendsMay 9ကိုညီညီတင် commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post 'ထိုက်ထိုက်တန်တန် တောင်းပန်ပါ'"ဤသို့ "တရားအလှူတော်" လှူဒါန်းရသည့် "ကုသိုလ် ကံ စေတနာ"တို့ ကြောင့် "ဒုက္ခခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းရာအမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်"ကို လျှင်မြန်စွာ မျက်မှောက်ပြုနိုင်သော အကြောင်း "အထောက်အပံ့" ဖြစ်ပါစေသော်ဝ်။
(ဓမ္မအသိဉာဏ်…"May 7မူကြိုဆရာ commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"ကောင်းမွန်သင့်မြတ်လှပါတယ်ဘုရား...။ တပည့်တော်၊ ကလေးတို့ဆရာမနေရာမှာမေးလို့ ရရင်တခုလောက်မေးချင်တယ်ဘုရား ဒီခေတ်မှာ သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလဲဘုရားလို့တစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်ဘုရား.....?"May 6kham liked ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'May 6aye min commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"မှတ်သား သွားပါတယ် ဘုရား"May 6PPThi commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အမေး အဖြေတွေကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်ရှင်။"May 6PPThi liked ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'May 6အရှင်ဝိမလဝံသ commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"ဆိုဒ်ကိုမရောက်ဖြစ်တာကြာသွားပါပြီ။ ဒီနေ့စရောက်တယ်ဆို တကယ့်တန်ဘိုးကြီး ပိုစ့်လေးကို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် မေးမြန်သူ ကလေးတို့ဆရာမနဲ့ ဖြေဆိုသူ အရှင်ပဏ္ဍိတတို့အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ အမေးလည်းကောင်း အဖြေလည်းကောင်း အားလုံးကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။"May 6hla moe 24 commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"ကျေးဇူးတင်ပါသည်.................အားရ ပါးရ ရှိလှပါတယ်"May 6♣တောသူမလေး♣ commented on ကိုညီညီတင်'s blog post '"၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တစ်လတာအတွင်း နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓမ္မဘလော့ဘ်တစ်ပုဒ် ကြေညာခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်"'"ဘာသာရေးအကောင်းဆုံးပိုစ့်ဆုရလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဘုရား
ဘာသာရေးဆောင်းပါးပိုစ့်လေးများကို ဒီထက်မက ဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေဘုရား
"May 6♣တောသူမလေး♣ liked ကိုညီညီတင်'s blog post '"၂၀၁၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တစ်လတာအတွင်း နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓမ္မဘလော့ဘ်တစ်ပုဒ် ကြေညာခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်"'May 6♣တောသူမလေး♣ commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post '"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)'"ဆရာမရဲ့ အဖိုးတန်မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ အရှင်ဘုရားရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖြေလေးတွေဖတ်ရူရလို့ ကျေးဇူးထူးတင်မိပါတယ်ရှင့်
အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးကို…"May6More... RSS
ကြည်နူးဖွယ် ဓမ္မတေးသီချင်းများနားသောတဆင်နိုင်ပါသည်။ ဓမ္မဒေသနာ ဆယ်ရက်တရားတော်များ နားဆင်နိုင်ပါသည်။ ကြာနီကန်တရားတော်များ နားကြားနိုင်ပါသည်။ ♣တောသူမလေး♣'s Blog
"မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
ဒီဘလော့ကို May 6, 2013 တွင်11:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 12 Comments
ဒီဘလော့ကို May 3, 2013 တွင်4:23pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
မိဘပစ္စည်းသည် သားသမီးတိုင်း၏ အမွေဆိုင်မဟုတ်
ဒီဘလော့ကို May 3, 2013 တွင်4:22pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို May 2, 2013 တွင်12:47pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ကုသိုလ်ကြီးရင် နတ်မတပေမယ့် နတ်မပါတယ်
ဒီဘလော့ကို May 2, 2013 တွင်12:44pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
လောကီချမ်းသာဆိုတာလည်း ကုသိုလ်ဘုန်းကံပါမှ ခံစားခွင့်ရှိတယ်
ဒီဘလော့ကို May 2, 2013 တွင်12:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို April 28, 2013 တွင်4:59pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို April 28, 2013 တွင်4:57pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို April 28, 2013 တွင်4:55pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို April 27, 2013 တွင်11:36am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို April 27, 2013 တွင်11:35am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဒီဘလော့ကို April 27, 2013 တွင်11:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
ဒီဘလော့ကို April 26, 2013 တွင်1:15pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဒီဘလော့ကို April 26, 2013 တွင်1:12pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဒီဘလော့ကို April 26, 2013 တွင်1:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
သံဃာကိုလှူတဲ့ သင်္ကန်းနဲ့မှ ကထိန်ခင်းခွင့်ရှိတယ်
ဒီဘလော့ကို April 25, 2013 တွင်4:59pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဆွမ်းဆို မြိန်မှ၊ သင်္ကန်းဆို ကထိန်မှ
ဒီဘလော့ကို April 25, 2013 တွင်4:58pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ဘယ်လောက်ရရ ပြည့်ပြည့်သိပ်သိပ် သိမ်းနိုင်တယ်
ဒီဘလော့ကို April 25, 2013 တွင်4:58pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဘာပဲစားစား ရဲရဲတင်းတင်း စားနိုင်တယ်
ဒီဘလော့ကို April 24, 2013 တွင်1:16pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (181 comments)
3:49pm အချိန်May 24, 2013, တွင်နန်းလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကျေးဖူးပါ.. 7:29pm အချိန်May 16, 2013, တွင်saw htwe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမလေးရေ mp3 တရားဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်လောက်တင်ချင်လို့ ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာ ပြောပေးစေလိုပါတယ်။ 10:44am အချိန်May 14, 2013, တွင်သူရိယ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ကျတော်မွှေးနေံအမှတ်တရရှိနေပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဘ၀မှာအဆင်မပြေမှုတွေ့ကင်းဝေး ကိုမြတ်နိုးတဲ့ဘ၀ ပန်းတိုင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် 11:23pm အချိန်May 2, 2013, တွင်ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ သမိးလေးရေ--အင်တာဗျူးစာမူရပြီလား- ဦးဇင်းကလှမ်းမေးလို.ပါ- ရွှင်လန်းချမ်ေးမြ့ပါစေကွယ် 6:14pm အချိန်April 29, 2013, တွင်တာတာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ တောသူမလေးရေလာလည်တာအရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တာတာလဲပြန်လာလည်သွားတယ်နော် ပျော်ရွှင်ပါစေ 3:11pm အချိန်April 26, 2013, တွင်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) လာရောက်ခဲ့ပါတယ်..။ အခုက နယ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက် အင်တာဗျူးဓာတ်ပုံကို ဦးဇင်းကိုယ်ပိုင်နေရာကနေပဲ ယူလိုက်ဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. 10:13pm အချိန်April 16, 2013, တွင်ရဲမင်းထွန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ စာပြန်ပို.တာနောက်ကျတဲ.အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော်အလုပ်နည်းနည်းများနေတဲ.အတွက်ပါခင်ဗျာ 2:24pm အချိန်April 14, 2013, တွင်မောင်ကျော်သူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မမခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ ကျတော်စီရောက်ခဲ့ပြီးဆုတောင်ပေးခဲ့တာကိုမောင်လေး ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည်ပါစေ..မမဘဝတိုင်ဘဝတိုင်မှာမရှိသောစကားမကြာပါနဲ့..လိုရာဆန္ဒပြည့် ဝပါစေ..မောင်လေး 9:14pm အချိန်April 13, 2013, တွင်အရှင်တေဇောဘာသ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ တောသူမလေး....ဦးဇင်းလည်းလာလှည်သွားတယ်နော်...သာသနာအမြဲတမ်းပြုနိုင်ပါစေ... 12:42pm အချိန်April 11, 2013, တွင်Zaw Min Htun မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမလေး (စိတ်နှလုံးလှတဲ့ တောသူမလေးသို့) မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ခရီးလွန်နေခြင်းအတွက် ဖွင့်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဘုရားအလိုကျ ဘာသာ သာသနာအတွက် အခွင့်ရေးရတိုင်း ကောင်းမှုကုသိုလ်များပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ တရားအားထုတ်ခြင်းများကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်လည်း ညီမလေးကိုလည်း ကုသိုလ် အမျှပေးဝေပါတယ်။ ညီမလေးလည်း အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်ပေမယ့် လူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားတည်ပေးနေခြင်းကို တွေ့မြင်ဖတ်ရှု့နေရလို့ ၀မ်းသာပီတိ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အကိုတို့ မြန်မာလူမျိုး လူငယ်တွေထဲမှာလည်း အထူးသဖြင့် လူငယ် အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အခုလို ဘာသာ သာသနာအတွက် စွမ်းဆောင်နိုင်သလောက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းအတွက် ထပ်ဆင့် ဂုဏ်ယူ အားပေးမိပါတယ်။ ညီမလေးနဲ့ မိသားစု ကိုယ်စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ပြီး လောဘ ဒေါသ မောဟ နည်းစွာဖြင့် မနာလိုဝန်တိုခြင်းများ ကင်းရှင်းစွာ ဘာသာ သာသနာ နှင့် မိမိ လူမျိုး မိမိ မိသားစုအတွက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေရန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်။
ဦးဇော်ဇော်(ခ)ဇော်မင်းထွန်း ကလောမြို့။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း 7:44am အချိန်April 9, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 8:54pm အချိန်April 8, 2013, တွင်အရှင်တေဇောဘာသ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဦးဇင်းပြန်လာလည်သွားတယ်နော်...တောသူမလေးသာသနာပြုနိုင်ပါစေ..... 8:40pm အချိန်April 4, 2013, တွင်နှင်းဝေဆောင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဆိုတာ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်တိုင် (အပြည့်အဝ) တာဝန်ယူရ တဲ့ဘာသာပါ
ကြိုဆိုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...တောသူမလေး...ခင်ဗျား.။ 8:22pm အချိန်April 2, 2013, တွင်စိုးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ တောသူမလေးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ စိုးလေးက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလျက်ပါ။ 11:51am အချိန်March 27, 2013, တွင်bo ye 98 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမလေးရဲ့အိမ်ကိုလာလည်သွားပါတယ်။ဘုရားပုံတွေအလိုရှိတဲ့အခါယူသုံးပါ။ယူသုံးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ 4:31pm အချိန်March 23, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမရေ ကိုလှိုင်က အင်တာဗျူးမေးခွန်းပြီးရင်ပို့ပေးဖို့ ပြောပေးပါဆိုလို့ လာမှာပါတယ်နော်။ 7:33pm အချိန်March 22, 2013, တွင်khin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မွေးနေ့ဆုတောင်း အတွက် ကျေးဇူးပါညီမ 5:12pm အချိန်March 12, 2013, တွင်Pre-ပိစိကွေးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်... ကြည်နူးဖွယ်တေးသွားကို ညီညီညာညာ တီးခက်သွားကြတာပါပဲ....။ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါရဲ့...။
အက်ဒ်မန် ကိုကောင်းမြတ်မင်း-ပြီးရင် ဦးဇင်းတို့ရဲ့ စာရေးဆရာမ အစ်မကြီးစော(စောသဇင်+စုစုမာ)ကို အင်တာဗျူးစေချငပါတယ်...။ နောက်ပြီးတော့ ကိုလှိုင်ကျော်ထွေး... သူလည်း အတွေးကောင်းတွေကို လျှိုဝှက်ထားသူလေ..။ တောသူမလေးကိုကော ဘယ်သူပြန် အင်တာဗျူးပေးမလဲ...။ ... ။ ဒါကိုလည်း စဉ်းစားရမယ်..။ ဒါ့အပြင် ဆရာတော် အရှင်ဝိမလ၀ံသ-ကို ဗျူးပြီးရင် ဆရာတော်-အရှင်နန္ဒ၀ံသ(အမေရိကန်)နဲ့ နောင်တော်ဦးဝဏ္ဏသာရာလင်္ကာရ(မဟာဂန္ဓာရုံ)တို့ကိုလည်း ဗျူးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်...။ တစ်လ-ကို တစ်ဦးဗျူးပေးစေချင်ပါတယ်...။ ဆရာတော်တွေနဲ့တခြား..တခြားသော အမှန်တရားလမ်းသို့ လျှောက်လှမ်းနေသူများရဲ့ အမြင်တွေ.. အတွေးတွေ... အယူအဆတွေ..ကို အတုယူ..မှတ်သား... နာကြားချင်ပါဘိ..
ပြီးတော့ ဦးဇင်းမသိသေးတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်...။ မအဖြူရောင်(မသဇင်ဝင်း)လည်း တော်ပါတယ်...။
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) 6:25pm အချိန်March 11, 2013, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမရေ အလည်လာပါ၏ ..။ သီချင်းလား / မေတ္တာပို့  ဘာလဲတော့ မသိဘူး နားထောင်သွားပါ၏..။ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ဒီဘ၀ တရားတွေ့ ပါစေလို့ ဆုမွန်ခြွေခဲ့ပါတယ်..။ 3:51pm အချိန်March 10, 2013, တွင်kolayko မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီမိသားစုလေးကြောင့် ဘာသာ သာသနာ တန်ဖိုး
ညီမနဲ့တကွ ဒီမိသားစုတခု ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်း
သာသာ နဲ့ဘာသာသာသနာအတွက် အဓွန့်ရှည်
တည်တံ့ ပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ပါတယ် မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
Top News · Everything thuthunaing postedastatus"ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုပါ"8 minutes ago 0
ဓနုလေးဖိုးအော် liked မောင်မြင့်'s blog post 'ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ'9 minutes agothuthunaing commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မနေသူတွေထဲမှာ နေပါ..'"မှတ်သားထားပါ့မယ်"11 minutes agoဇော်ထက်မောင် commented on မောင်မြင့်'s blog post 'ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ'"သာဓု သာဓု သာဓုပါခင်ဗျာ ကြည့်ရှုသွားပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ အခါကြီးရက်ကြီးမျိုး…"1 hour agoမောင်မြင့် postedablog postကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ ကဆုန် လပြည့်နေ့ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုအတွက် အထွဋ်အမြတ်ထားရာ နေ့ထူးနေ့မြတ် ။ ကဆုန် လပြည့်…See More1 hour ago 1
aung aung soe commented on dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၁'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"2 hours agoye latt, အားလုံးမင်္ဂလာပါ, ကျော်ကျော်အောင် and4more joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺2 hours agoThaung Tan posted blog postsအဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး တရားအားထုတ်ပါအဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး တရားအားထုတ်ပါ3 hours agosusuwin liked ကောင်းမြတ်မင်း's group ၀ိပဿနာရှူနည်းများလေ့လာနိုင်ရန်..3 hours agoမြတ်သွင်ကို commented on ကောင်းမြတ်မင်း's blog post 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်လေးကို Android ဖုန်းတွေအတွက်(APK)'"ကျေးဇူးပါ"3 hours agoလှိုင်ကျော်ထွေး posted blog postsခန္တီ နဲ့ ဥပေက္ခာ ဘာများထူးခြားသလဲဒါနနဲ့ စာဂဟာ အတူတူပဲလော၊ ဒါနနဲ့ ပရိစ္စာဂ ဘာထူးသလဲ4 hours ago More... RSS